Amniga degmada Dhuusamareeb oo laga shiray – Radio Muqdisho
Amniga degmada Dhuusamareeb oo laga shiray
Kulan looga hadlayay amniga oo ay ka qeyb galeen mas’uuliyiinta maamulka degmada iyo qeybaha bulshada ayaa maanta lagu qabtay Degmadda Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud.
Kulanka waxaa kaloo ka qeyb galay guddiyada afarta xaafadood ee ay degmadu ka koobantahay iyo qaar ka mid ah saraakiisha amniga, waxaana ugu dambeyn la isku afgartay in si wada jir ah looga qeyb qaato xaqiijinta amniga.
Guddoomiyaha degmada Dhuusamareeb Macalin Cabdiraxmaan Cali Maxamed oo la hadlay Warbaahinta ayaa ugu baaqay shacabka inay ka qeyb qaataan sugidda amniga, isla markaana ay ka hortagaan cid waliba oo amni darro abuureysa.
“Amniga qofka maamulka taageersan iyo kan ka soo horjeeddo intaba dan ayuu u yahay, aan ilaalino midnimadeena iyo mas’uuliyadda naga saaran xaqiijinta nabadgelyada degmada iyo deegaannada kale ee ku xeeran.
Guddoomiyaha Dhuusamareeb ayaa mar uu ka hadlayay warqado lagu daadiyay xaafado ka mid ah magaalada ayaa yiri “Way jirtaa warqado lagu daadiyay magaalada, waxaana daadiyay dad doonaya inay carqalado abuuraan oo ay qal qal geliyaan Nabadgelyada, ciidamada amniga ayaana dadaal ugu jira sidii ay u soo qaban lahaayeen ragga warqadaha ku daadiyay magaalada.”
Deeq dawo ah oo la gaarsiiyay cisbitaalka hooyada iyo dhallaanka ee Benaadir
Horumarinta xuquuqda haweenka oo Garoowe looga shiray